Telefaona: + 86-731-86450203
Fitrandrahana voa Fenugreek
Mitrandraka ravina mulberry
Inona ny nalaina rosemary? Ahoana ny momba ny fananana antioksika?
Ny nalaina dia avy amin'ny rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.), Zavamaniry tokana mahazatra izay nitombo tao amin'ny Alpes hatramin'ny taona antenatenany, ary hita manerantany. Rosemary dia nampiasaina nandritra ny an'arivony taona ho lasa zava-manitra matsiro, fitehirizana sakafo, amin'ny kosmetika sy vokatra volo, ary fanafody ahitra ho an'ny aretina isan-karazany. Hatramin'izao anefa, ny làlana simika marina misy vokany mahasoa dia mbola tsy fantatra.
Ny asidra Carnosic, Carnosol ary Rosmarinic asidra no singa mavitrika indrindra amin'ny fitrandrahana rosemary hita fa manana fiasa mahery vaika mahery vaika, ary ny asidra Carnosic dia heverina ho iray amin'ireo antioxidant izay mampihena ny radika malalaka amin'ny alàlan'ny fomba fanao cascade marobe.
"Ny antioxidant voajanahary dia tsy mahomby kokoa noho ny synthetic?"
Tatitra marobe amin'ny literatiora ary koa ny fianarantsika anatiny no manamarina fa raha ny marina, ny antiôlidant rosemary dia amin'ny ankamaroan'ny fampiharana mahomby kokoa noho ny vitamina E (synthetic), BHA, BHT, TBHQ sy ny hafa. Ho fanampin'izany, ny antioxidant rosemary dia mahazaka hafanana avo lenta kokoa, ary ny fampiasana azy io dia ahafahan'ny mpanjifa mitazona marika madio amin'ny vokatr'izy ireo ary tsy misy olana momba ny alergen.
Fa maninona no maka fitrohana rosemary?
Betsaka ny antioxidant tsara afaka miaro ny olombelona amin'ny fahasimbana mahery vaika. Na izany aza, ny fitrandrahana rosemary dia misy antioxidant mahery am-polony, ary manohana fiarovana mahery amin'ny aretina mitaiza, ao anatin'izany ny Alzheimer, iray amin'ireo aretina mampatahotra indrindra ankehitriny.
• Manome fiarovana mahery vaika amin'ny antioxidant
• Miaro ny sela atidoha amin'ny vokadratsin'ny fahanterana
• Mety hampihena ny fivoaran'ny aretin'i Alzheimer
• Miaro ny sela amin'ny karsinogen
• Atsaharo ny fitomboan'ny sela voan'ny homamiadana
• Manampy amin'ny soritr'aretin'ny alika mampitony, indrindra amin'ny vovoka
• Hatsarao ny vitamina E.
• Mihazona tosi-drà tosidra tsara
• Antioxidant maharitra maharitra
Inona no mampiavaka ny fitrandrahana rosemary?
Ny antioxidants dia voaporofo fa manala ny radika maimaim-poana, fa tsy ny antioxidants rehetra kosa no mitovy. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, raha vantany vao nanala ny radika malalaka ny antioksida iray dia tsy ilaina intsony izy io ho antioksida satria lasa fitambaran-javatra tsy mitongilana. Na mbola ratsy kokoa aza, lasa radika maimaimpoana io.
Eo no tsy itovizan'ny nalaina rosemary. Manana androm-piainan'ny antioxidant lava kokoa izy. Tsy izany ihany fa misy antioxidant am-polony ao, ao anatin'izany ny asidra Carnosic, iray amin'ireo antioksida tokana izay mampihena ny radika afaka amin'ny alàlan'ny fomba fanao amin'ny cascade marobe.
Ahoana ny fomba fiasan'ny ravina Mulberry 1-Deoxynojirimycin?
1-Deoxynojirimycin (DNJ) dia karazana alkaloid misy amin'ny ravina Mulberry sy ny hodi-kazo. Nekena ny DNJ hanana ny vokatry ny fitazonana ny haavon'ny glucose amin'ny rà mahasalama, ny hetsika Antiviral ary manampy amin'ny fanatsarana ny metabolisma amin'ny hoditra ary manadio ny hoditra.
Asehon'ny fikarohana fa rehefa niditra tao amin'ny vatana ny DNJ, dia misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny tsiranoka sy ny siramamy amin'ny sucrase, maltase, α-Glucosidase, α-amylase enzyme, ka hampihena be ny fidiran'ny siramamy ao amin'ny vatana, ary hitazona ny glucose betsaka milamina tsy misy fiovan'ny sakafo. Ho fanampin'izany, ny DNJ dia mandray anjara amin'ny fanafoanana ny dingan'ny fanovana glucose amin'ny glycoprotein membrane HIV. Mandritra izany fotoana izany, ny fanangonana glycoproteins mbola tsy matotra dia mety hampihena ny fusionan'ny sela sy ny fifamatorana eo amin'ny virus sy ny receptor cell host, ary ny fananganana firindrana ny vatan'ny sela hamongorana ny famerenana ny MoLV ka hahasoa ny asa cytostatic
Inona no fiasan'ny Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin?
Ny ravina mulberry dia heverina ho ahitra mahafinaritra any Sina fahiny ho an'ny anti-mamaivay, manohana ny fanoherana ny fahanterana sy ny fitazonana ny fahasalamana. Ny ravina mulberi dia manan-karena asidra amine, vitamina C ary antioksida. Amin'ireto singa ireto, ny tena sarobidy indrindra dia ny Rutoside sy DNJ (1-Deoxynojimycin), ny fikarohana farany nataon'ny sinoa dia nampiseho fa ny Rutoside sy ny DNJ dia mandaitra amin'ny fandrindrana ny tavy amin'ny rà, ny fifandanjana ny tosidra, ny fampihenana ny glucose amin'ny ra ary ny fampitomboana ny metabolism.
Inona ny vokatry ny laozaozy ravina mulberry 1-Deoxynojirimycin amin'ny tsiranoka lipidan'ny ra amin'ny olombelona?
Ny ravina mulberi dia manankarena amin'ny 1-deoxynojirimycin (DNJ), izay sarobidy amin'ny fitazonana ambaratonga α-glucosidase salama. Nasehonay teo aloha fa ny fitrandrahana ravina mulberry manan-karena DNJ dia nanakana ny fiakaran'ny glucose aorian'ny postprandial amin'ny olombelona. Ny tanjon'ity fandinihana ity dia ny fanombanana ny vokatry ny fakana ravina mulberry manan-karena DNJ amin'ny mombamomba ny lipidia plasma amin'ny olombelona. Ny fanadihadiana misokatra sy misy vondrona iray dia natao tamina lohahevitra 10 miaraka amin'ny haavon'ny serum triglyceride (TG) level200 mg / dl. Ny lohahevitra natelina kapsula misy DNJ manankarena ravina mulbera 12 mg intelo isan'andro alohan'ny sakafo mandritra ny 12 herinandro. Ny valim-pikarohanay dia nampiseho fa ny haavon'ny TG ao anaty serum dia nampidinina tamim-pahamendrehana ary ny mombamomba ny lipoprotein dia nisy fiovana mahasoa tamin'ny fanarahana ny 12-herinandro fitantanana ny ravina mulberry manan-karena DNJ. Tsy nisy fiovana lehibe teo amin'ny masontsivana hematolojika na biokimika hita nandritra ny vanim-potoanan'ny fianarana; tsy nisy zava-dratsy nitranga tamin'ny fitrandrahana ravina mulberry manan-karena DNJ.
Inona ny fakan-tsakafo Fenugreek?
Fantatra kokoa amin'ny Tandrefana ho zava-manitra kari, Fenugreek manohana ambaratonga testosterone salama, manome tombony voaporofo ao amin'ny gym - sy ny efitrano fandriana. Izy io koa dia mampiroborobo ny famokarana ronono amin'ny vehivavy mitaiza ary mitazona ny fahasalamana amin'ny aty. Ny voa Fenugreek dia be mpampiasa amin'ny galactagogue (mpamokatra mpamokatra ronono) ataon'ireo reny mitaiza mba hanatsarana ny famatsian-dronono. Ny fanadihadiana dia naneho fa nyfenugreek dia stimulator mahery amin'ny famokarana ronono an-tratra.Fenugreek koa dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro mba hitazomana ny haavon'ny glucose sy ny fifandanjana ara-siramamy ao anaty. Ny fitsapana ara-pitsaboana vao haingana dia naneho an'i Fenugreek izay manentana ny tsiranoka insuline miankina amin'ny glucose amin'ny pancreas. Ny fanadihadiana dia nanamarina ny fananana hypoglycemic an'ny voa grika Fenugreek, izany hoe. Izy io dia afaka manampy amin'ny fihazonana haavon'ny siramamy ao anaty ra, ary manampy amin'ny fihenan'ny lanja sy ny fihenan'ny tavy koa izany. Ny asan'ny masomboly Fenugreek dia esorina toy ny etsy ambany:
• Amboary ny metabolisma
• Fanamafisana ny fanamafisana ny lahy, fitondra-fiara ary fampisehoana an-tsehatra
• fitomboan'ny tombony azo amin'ny fiezahana
• Manatsara ny famokarana ronono amin'ny vehivavy mitaiza
• Manatsara ny fiasan'ny sarakaty
• Mihazona glusoce ra salama tsara
• Tombontsoa ho an'ny fahasalaman'ny aty
Inona ny saponins Furostanol?
Ny saponins Furostanol dia misy amin'ny zavamaniry fenugreek saponin, manampy ny fihazonana testosteronone ambaratonga tsara amin'ny alàlan'ny fanentanana ny vatana hamokatra hormonina luteinizing sy dehydroepiandrosteron. Nampiasaina izy io ho fampiroboroboana ny angovo voajanahary ho an'ny lehilahy, ny fivezivezena ary ny fahombiazany ary hanamafisana ny fitomboan'ny hozatra. .Ny fandinihana ankehitriny dia manondro fa ny singa lehibe ao aminy, ny saponin Furostanol, izay sapinin'andriamanitraininina taloha, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny singa mavitrika.
Hitan'ny atleta aerobika fa rehefa avy naka ireo saponins fenugreek dia nihatsara ny filan'izy ireo. Izany dia heverina ho zavatra tsara ho an'ireo olona te-hahazo lanja, azo ampiasaina ho Fanamafisana ny fananganana hozatra. Ny fanadihadiana natao tamin'ny volana Jona 2011 tao amin'ny Ivon-toerana Aostralianina ho an'ny fitsaboana klinika sy ny Molecular Integrative dia nahitana lehilahy 25 ka hatramin'ny 52 taona dia naka fika fenugreek indroa isan'andro mandritra ny enim-bolana dia nahatratra 25% ambonimbony kokoa tamin'ny fanandramana nandrefesana ny haavon'ny libido noho ireo izay naka Placebo. Fitsapana koa. dia natolotry ny 20% mahery.
Inona no atao hoe 4-hydroxyisoleucine?
4-hydroxyisoleucine dia asidra amine tsy proteinina, izay misy amin'ny zavamaniry fenugreek, indrindra amin'ny voa fenugreek, miaraka amin'ny vokatry ny fanentanana ny tsiranoka insuline. Ho fanampin'izany, 4-hydroxy-isoleucine dia afaka manatsara ny kôline miditra amin'ny sela hozatra. Afaka manatsara ny tanjaky ny hozatra sy ny hozatry ny hozatra ary mampitombo ny tanjaka sy ny haben'ny sela hozatra.
"Serivisy inona no azonao omena?"
Hananganana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa, amin'izay dia hanome anao ny tsara indrindra alohan'ny varotra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Serivisy alohan'ny varotra
1. santionany maimaimpoana kely;
2. Fanohanana ara-teknika matanjaka avy amin'ny ivon-toeranay sy Ivotoerana fikarohana;
3. Manolora vahaolana mety amin'ny tetikasanao.
4. Fampahalalana feno momba ny angona teknika, toy ny CoA, MoA, MSDS, Process Flow, Test Reports, sns.
Ahoana ny serivisy aorian'ny fivarotana?
1. Omeo fampahalalana momba ny fandefasana anao ara-potoana;
2. Fanampiana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny ladoany;
3. Hamafiso ny entam-barotra azo raisina;
4. Rafitra sy serivisy fanarahana vokatra tonga lafatra;
5. Tompon'andraikitra aminay ny olan'ny kalitaon'ny entana
Adiresin'ny birao: No.708 Changsha Road, Changsha City, Provinsi Hunan, Sina
Adiresin'ny orinasa: No.12 Erkang Road, Liuyang Economic Technological Development Zone, Changsha City, 410324, Hunan, Sina
Tranonkala taloha: www.geneham.com